Nhau - Chii chiri muchina wekuzadza
Mushini wekuzadza unonyanya iri diki diki yezvigadzirwa mumuchina wekurongedza. Kubva pakuona kwekutakura zvinhu, inogona kukamurwa kuita yemvura yekuzadza muchina, poda yekuzadza muchina, poda yekuzadza muchina uye chidimbu chekuzadza muchina.Kubva padanho rekushandisa kwekugadzira rakakamurwa kuita semi-otomatiki yekuzadza muchina uye otomatiki yekuzadza mutsara. neQS certification yechikafu, vanogadzira mafuta vanodyiwa vatanga kutarisisa mhando yechigadzirwa uye kurongedza, saka oiri yekuzadza muchina mumuchina wekuzadza wakakurumbira chinzvimbo.
Kuzadza muchina zvinoenderana nemutemo wekuzadza unogona kukamurwa muchadenga muchina wekuzadza, wekumanikidza wekuzadza muchina, wemvura yekuzadza muchina, oiri yekuzadza muchina, nyora yekuzadza muchina, peta yekuzadza muchina, granule yekuzadza muchina, poda yekuzadza muchina, bhakiti mvura yekuzadza muchina uye yekuzadza vharuvhu muchina.
Maitiro emuchina wekuzadza mvura unowanzo: mabhokisi akaunganidzwa nebhodhoro risina chinhu patray, bhandi rekutakura kuburitsa tireyi muchina, bvisa tireyi rimwe nerimwe, bhokisi riine bhandi rekuendesa kuburitsa muchina, bvisa mabhodhoro asina chinhu mubhokisi, durura bhandi rekutakura kuenda kumuchina wekuwachisa, wakachena, uye wozoendeswa kumuchina wekurongedza, kuitira kuti chinwiwa chine mabhodhoro chiite chimwe. Mabhodhoro asina chinhu anotorwa kubva kune unloader anotumirwa kune washer yebhodhoro kuti isabatwe utachiona uye kucheneswa neimwe bhandi rinotakura. . Mushure mekuongororwa nemuongorori wemabhodhoro uye nekusangana nematanho ekuchenesa, anoiswa mumushini wekuzadza uye muchina wekukwatisa. Zvinwiwa zvinoiswa mumabhodhoro nekuzadza michina.Zvinwiwa zvemumabhodhoro zvinovharwa nemuchina wekutora uye kuendeswa kumuchina wekunyora yekunyora. Mushure mekunyorwa kwezvinyorwa, zvinotumirwa kumuchina wekurongedza kurodha mubhokisi uye ndokuzotumirwa kumuchina wekuisira zvinhu wekuisira pamwe nekutumira kuimba yekuchengetera.